CNA-Asia | Page 14 of 40 | The Best News Website for Readers
ဝူဟန်နောက်ကွယ်က ရှုပ်ထွေးမှု ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်မွေးထုတ်ပေးသူ” ဟားဗက်ဇီဝသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် တရုတ်အပေါင်းအပါ တရားခံတွေ အဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဟားဗက်ဇီဝသိပ္ပံပညာရှင် လိုင်ဘာကို တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့်အတူ………
February 1, 2020 By admin International News
တရုတ်နိုင်ငံဆီသို့ သုတေသနအချက်အလက်များ ခိုးရောင်းနေသော ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒပညာရှင်ကို အက်(စ်)ဘီအိုင် ကဖမ်းဆီး
တရုတ်နိုင်ငံဆီ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနများ ခိုးရောင်းရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန အကြီးအကဲနှင့် အခြားနှစ်ဦးကို အက်(စ်)ဘီအိုင် က ဖမ်းဆီးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက………
February 1, 2020 By admin Daily News
၁၂ ကြိမ်မြောက် ကျပ်တစ်ထောင်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဖွင့်ပွဲ ” ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းငါးထောင် “
၁။ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းငါးထောင် ဠ ၈၅၇၅၂၀ ၂။ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း ဠ ၉၁၁၅၄၆ ၃။ ကျပ်သိန်း ငါးထောင်………
Safety စင်ကာပူကတော့ ထပ်ပြီး တင်းကျပ်လိုက်ပြီ ! “တရုတ်ခရီးသွားများအား စင်ကာပူသို့ ဝင်ခွင့်ပိတ် “
Safety စင်ကာပူကတော့ ထပ်ပြီး တင်းကျပ်လိုက်ပြီ ! “တရုတ်ခရီးသွားများအား စင်ကာပူသို့ ဝင်ခွင့်ပိတ် ” တရုတ်ပြည်မကြီးမှ ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်ခရီးသွားများကို စင်ကာပူက နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ခွင့်မပြုတော့ဘဲ………
February 1, 2020 By admin Asian News
နိုင်ငံဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးတွေ ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ် ဆိုင်းငံ့
နိုင်ငံဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးတွေကို ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကို ဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဇော်ဌေးက ဒီကနေ့ အိမ်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ မူလက နိုင်ငံဝန်ထမ်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးနဲ့ အထက်အပါအဝင် ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေ၊ လုပ်သက် ၂၅………
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖျားနာခရီးသည်တစ်ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဖျားနာခရီးသည်တစ်ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက် ရန်ကုန်၊ (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁)………
အမေရိကန် ကျည်းတပ်ကဖြည့်တင်းသွားမည့် မျိုးဆက်သစ်သံချပ်ကာယာဉ်များအကြောင်း
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြည်းတပ်အတွက် ဘက်စုံသုံးသံချပ်ကာယာဉ် (အေအမ်ပီဗွီ) အစင်းရေ၁၆၀ ၀ယ်ယူဖြည့်တင်းသွားဖို့အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဒသမ ၉ သန်းတန်ဖိုးရှိ သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို ဇန်နဝါရီလ………
January 31, 2020 By Editor International News
ရုရှားနိုင်ငံ Rybinsk မြို့ရှိ JSC သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်ကတည်းက စစ်သင်္ဘောများစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအလတ်စားနှင့်အပေါ့စားသင်္ဘောများကိုအဓိကထား၍တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ Vympel ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှုတို့ကို ခိုင်မာသောသမိုင်းကြောင်းကအဆုံးအဖြတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။အတွေ့အကြုံများပြားသည့်အပြင်………
ဆိုးရွားလှတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို အနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ တရုတ်သမ္မတပြော
ဆိုးရွားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ကူးစက်ပြန့့်ပွားနေတာကို တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အနိုင်ယူ နှိမ်နင်းသွားမယ်လို့ သမ္မတ ရှီ ကျင့်ဖျင်က အခိုင်အမာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့………
January 30, 2020 By admin Daily News
ဝူဟန်မြို့ကပြန်လာမည့် မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၁၄ရက်ကြာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့် နေရာအား စစ်ဆေး
2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ဝူဟန်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေသော မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပါက ခေတ္တနေထိုင်ရန်နေရာ အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံ ပြုပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကို မနက်ပိုင်းကတစ်ကြိမ်နဲ့ ညနေပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်………